Izindawo ze-Casino zaseLatvia Online - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
(766 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Ngemuva kokumenyezelwa kwenkululeko ekuqaleni kweminyaka yama-1990, imboni yezemidlalo yaseLatvia yathuthuka. Kodwa-ke, kuze kube ngu-1998, yayingalawulwa ngokuphelele. Kamuva, noma kunjalo, yadalwa i-Inspectorate for Control ngokugembula namalotho. Ngo-2013, sekuvele kukhishwe amalayisense ayi-17. Futhi ngo-2012, inzuzo yezinkampani zokugembula kuleli yafinyelela ngaphezu kwezigidi ezingama-180 zama-euro, iningi lawo elethe imishini yama-slot.
Ngokuhamba kwesikhathi, imithetho yezwe yokugembula iye yaqinisa kancane kancane ukulawula umkhakha wemboni yokugembula. Ku-2016 isinqumo senziwe eLatvia ukukhulisa usayizi wentela yokugembula. Lesi sinqumo nezinye izindlela eziningana eziqinile zokunqanda ubukhulu bokugembula kuholele ekutheni isibalo sokugembula sehliswe kancane kancane ezweni. Njengamanje, kunamakhasino ama-5 namahholo amageyimu angaphezudlwana kwama-300 - kucishe kube uhhafu uma kuqhathaniswa no-2007.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zaseLatvia eziku-Casino
Ukugembula oku-intanethi eLatvia
Imakethe yokugembula okuku-inthanethi ezweni yagunyazwa futhi yalawulwa ngo-2003. Zonke izingosi zokugembula eziku-inthanethi eLatvia ezinikeza abadlali baseLatvia ukugembula kufanele zithole amalayisense ayimpoqo futhi zikhokhe intela ka-10% wayo yonke imali engenayo. Kodwa-ke, kunezinhlelo zokushintsha imithetho yokugembula online eLatvia, eyaba yinto ebhekwe kakhulu eYurophu kusukela ngo-2011, futhi engakagcwaliseki.
Ngokomthetho we-2014, zonke izikhungo zokugembula eziku-inthanethi eLatvia, kufaka phakathi amakamelo e-poker adume kakhulu avela emhlabeni wonke kufanele abhaliswe ezweni ukuhlinzeka izinsizakalo zawo ngokusemthethweni kwizakhamizi zaseLatvia. Ngasikhathi sinye, ukwandisa njalo uhlu lwamasayithi avinjelwe ukugembula ukugembula online, namuhla okunezizinda ezingaphezu kwenkulungwane.
Amasayithi e-casino e-intanethi avuma abadlali baseLatvia
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela eLatvia, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola ukuzijabulisa okuhlukahlukene kusuka kumishini ye-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile abanjengoNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi.
Ungakwazi futhi ukufunda ukubuyekezwa kwethu kwamasayithi we-casino e-intanethi, ukuze uqaphele ukukhushulwa okuhle kwe-intanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakalayo kubadlali baseLatvia.
ILatvia - izwe elinobuhle obuyinkimbinkimbi, elidume nge-amber yalo, isalmon nemibono emihle yoLwandle iBaltic. Imigwaqo emincane yaseRiga, iJurmala kanye neholide edumile esenyakatho ivinjelwe, kepha imvelo enhle kangako - konke lokhu kuyimpawu yezwe. Futhi izinto zinjalo ngebhizinisi lekhasino eLatvia nokuthi ngabe likhona yini ithuba lokudlala kuleli zwe ekhasino eliku-inthanethi futhi sizozama ukucacisa kule ndatshana.
Umlando wokugembula kusuka ku-1990 kuze kube namuhla;
Opharetha bamazwe angemthetho avinjelwe;
Uma i-opharetha yamazwe omhlaba ingavinjelwe, iyavunyelwa. Kepha ingafinyelela kuhlu lokungekho emthethweni nganoma yisiphi isikhathi;
Opharetha bendawo banamalayisense futhi banikela ngezinsizakalo zabo esikhaleni se-Intanethi. Lawa amasayithi afana ne: Optibet, Olympic Casino Latvia, Joker Ltd, viensviens.lv, “DLV”, “Alfor”. Zonke i-6 zikwezizinda ze-.lv;
E-Riga, amakhasino asemhlabeni angama-30. Kutholakala ehhotela. Ipasipoti engu-18 +;
Ungaqala kanjani ukudlala ekhasino eku-inthanethi? Imithetho namathiphu.
Funda kabanzi mayelana namakhasino adumile kakhulu eLatvia nangamaqiniso athakazelisayo, funda isihloko sethu.
Imithetho yaseLatvia ngokugembula - umlando ongemuva
Ngezikhathi zeSoviet, iLatvia yahambisana ngokuphelele nomthetho we-USSR futhi ukugembula endaweni yayo kwenziwa. Kulesi sifundo kwakuwukuphela kwelotho yombuso. Agasti 21, 1991 ILatvia imemezela inkululeko yayo, futhi kusukela ngalolu suku kuleli zwe kuqala indlela yayo yokuthuthukiswa komkhakha wezokugembula. Imicimbi emikhulu nezixazululo zomthetho esethula kuzo ngefomu lokucaca.
1990 Ikhasino lokuqala "iRiga" ehhotela elingaziwa. Amakhasino asebenza ngaphansi kwelayisense, kepha anikeza ama-gos ambalwa. iziphathimandla - iziphathimandla zendawo, uMnyango Wezangaphakathi kanye noMnyango Wezezimali. Ngokwenzayo, lokhu kuholela eqinisweni lokuthi akekho owazi kahle ukuthi mangaki amazwe akhiphe ilayisense nokuthi amakhasino asebenza kanjani.
1994 Ukwamukelwa kwemithetho yokuqala ethi “Kumalotto nokugembula” kanye “Nemisebenzi nentela kumalotho nokugembula.” Le mithetho ilawula ukukhokhwa kwentela kwezokugembula, iphinde ibeke usayizi wezimali zokukhipha amalayisense nezimvume zokugembula.
1995 Izinkampani zangaphandle azikwazi ukuba ngaphezu kuka-49% wemali eyabelwe opharetha. Inhlangano yeLatvia Association of Gaming Business.
2005 Umthetho omusha othi "On Gambling and Lottery" - ukuqinisa izidingo zenhlangano yekhasino kanye nezivakashi. Kufanele kube uhlelo lokuqapha ividiyo, ukuphepha okuthuthukisiwe, amalebula, ukwazisa mayelana nokulutha kokugembula.
2014 Kusukela ngoJuni 1, ukuqala kokuvinjwa kwamakhasino aku-inthanethi aphesheya kanye nabasebenza ngokubheja abangenayo ilayisense eLatvia. ILock ibandakanyeka ekuhlolweni kokulawulwa kweLotto kanye nokuGembula (iLotto nokuGembula Ukuhlolwa Kokuhlola- IAUI). Ngokusemthethweni, kungasebenza kuphela labo opharetha abaku-inthanethi abathole amalayisense eLatvia futhi bahlangabezana nezimfuneko zomthetho futhi bakhokhe intela njalo.
I-casino e-inthanethi e-Latvia:
Amakhasino angekho emthethweni eLatvia avimbele opharetha be-Intanethi. Uma unokufinyelela ekhasino eku-inthanethi, ngakho-ke ingadlalwa.
Isifinyezo esifushane. Kukhona ukufinyelela online - ungadlala. Kepha uhlu lweziza ezingekho emthethweni lukhula njalo, qaphela. Uma ngabe ikhasino yakho izoba "ohlwini lwabamnyama" lokufinyelela ku-akhawunti kuzoba nzima ukuyisusa futhi ingakuphumelela kwelinye izwe kuphela.
I-Casino engaxhunyiwe ku-Latvia:
ngokuvamile etholakala kumahhotela;
phakathi kweminyaka yobudala be-18 nepasipoti.
Ungaqala kanjani ukudlala ku-casino e-intanethi?
Ake sibone ukuthi yini okudingeka uyenze ukuze udlale ekhasino eku-inthanethi bekumnandi, kunokuba kube yinkinga.
Ingabe umdlalo ngokusemthethweni kukhasino eku-inthanethi? Njengamanje eLatvia isimo sinjengokuthi okungavunyelwe futhi akuvinjelwe - kunikwe amandla. Uma ukwazi ukufinyelela kusayithi, lapho-ke ungadlala. Kwesinye isikhathi amasayithi ekhasino ngokwawo avimba abasebenzisi abavela emazweni athile ngekheli le-IP. Imininingwane ephelele ingatholakala ngqo kwisayithi yekhasino.
Ingabe amakhasino aku-inthanethi athembekile? Ngalokhu ungasebenzisa uhlu lwethu lwamakhasino athembekile futhi ucacise ukuba semthethweni kwabo endaweni yaseLatvia (umlawuli angangeza isayithi nganoma yisiphi isikhathi, ngakho-ke isiqinisekiso esingu-100% kuhlu, maye, akekho umuntu ongakwazi ukusinikeza. Noma ngokwakho thola opharetha ofanele online. Okuyinhloko okudingeka unake:
Amakhasino asemthethweni alayisensi ayatholakala esidlangalaleni;
Ulwazi lomsebenzi okungenani iminyaka engu-3;
Ukuphawula komdlali (okuhle nokubi);
Ukuba khona kwempendulo - imininingwane yokuxhumana, i-imeyili, ingxoxo;
Ama-software anelayisense onjiniyela abaziwayo (i-Microgaming, NetEnt, Playtech, njll.);
uhlelo lokuvikela - Ukubethela kwe-SSL, ukuqinisekiswa kwedatha yomuntu siqu.
Ingabe kukhona indlela efanele yokukhokha yokwengeza noma ukuhoxisa izimali?
Ingabe lukhona uhlelo lwebhonasi? Yiziphi izimo zokubheja nezokulingisa? Luthini uhlelo lokuthembeka?
Ingabe ikhona imidlalo oyithandayo? Ingabe yonke imininingwane ecacile mayelana nemithetho yemidlalo yasekhasino, ukuzulazula kwesayithi?
Uma usuzibuze le mibuzo - cishe usukulungele ukuqala umdlalo. Sincoma ukuthi uvivinye ekuqaleni kwekhasino ngaphandle kwediphozithi (imvamisa kunemidlalo yamahhala), futhi ufunde nemithetho yemidlalo nezeluleko zokuphathwa kwebhange uma kunesidingo. Ngakho-ke ungathola injabulo enkulu futhi unciphise ukulahleka kwezimali zabo.
Enhlokodolobha yaseLatvia cishe izikhungo ezingama-30 zokugembula ezinobukhulu obuhlukahlukene. Ake sicabangele ezimbili ezinkulu futhi zikanokusho kunazo zonke - I-Olympic iVoodoo Casino futhi I-Royal Casino .
Owokuqala wabo ungowenkampani weQembu Lezokuzijabulisa le-Olympic ngu , ephethe inethiwekhi yezindlu zokugembula esifundeni saseBaltic, kanye nasePoland, eSlovakia, Belarus nase-Italy.
Ungakhathazeki, i-casino ayihlangene nomlingo omnyama. Le ndawo yokudlela yekilasi lokuqala, etholakala eHhotela Radisson Blu eduze kweDolobha Elidala. Kunezikhala eziningi, amatafula e-roulette, i-blackjack ne-poker.
Njalo ngoLwesihlanu nangoMgqibelo e-Olympic Voodoo Casino bukhoma umculo emgodini kulezi zinsuku kuyajabulisa ukuhlala.
Kuthe ukuqhela esikhungweni - I-Royal Casino Spa yi-Hotel & Resort . Isakhiwo esidala, esihle kakhulu, esikhulu kakhulu sokuzijabulisa esine-nightclub, ibha, indawo yokudlela futhi, nakanjani, yikhasino.
Ingxenye yokugembula yenkimbinkimbi ibukeka ibiza kakhulu - igolide, ubucwebe, izinto zokuvuna, ezifana namakamelo asebukhosini. I-Royal Casino ibanjwe I-World Championship ye-Poker , kanye ne i-Unibet i-Open .
Imidlalo yendabuko - imishini ye-slot, i-roulette, i-blackjack, njll.
Ikhodi yokugqoka kuzo zombili izikhungo uma kukhona, “okuthambile” kakhulu. Vele ugqoke ngendlela efanele futhi akukho zinkinga ezingeke zifakwe.
Idlule iminyaka engu-18.
IRiga, eLatvia: “IParis Yasenyakatho”
Kwaphela amakhulu eminyaka, iRiga yayiyidolobha elibaluleke kakhulu futhi elikhulu kunawo wonke enyakatho-mpumalanga yeYurophu. Manje enhlokodolobha yaseLatvia, kuhlala abantu abangaphansi kwezinkulungwane ezingama-700.
I-Riga itholakala osebeni loMfula iDaugava, okuthe kaningi uyiqhathanisa neParis. NjengaseTallinn, iRiga inesimanga Old Town , ibanjwe ngezikhathi eziningi, kanye nezakhiwo eziningi ngezitayela ezihluke ngokuphelele - kusuka eGothic kuya ku-Art Nouveau.
Umlando waseLatvia uyinkimbinkimbi futhi uyingqayizivele. Izwe aliphinde lizithole selisenkabeni yokubhekana namandla amakhulu. Izimpi eziningi zithonye kakhulu isithombe sesimanje seRiga.
Iminyaka engamashumi ayisihlanu eLatvia yayiyingxenye yeSoviet Union futhi yazuza ukuzimela ku-1991.
Ku-2014 Riga kuyoba yi-European Capital of Culture.
I-Latvia ebalazweni laseYurophu
I-1. Idolobha elidala: i-maze yemigwaqo, i-cobblestone, umlingiswa ohlukile wasendulo. Qiniseka ukuthi ubheka i-Town Hall Square. Kunezinto eziningi ezithakazelisayo. Kusuka ezakhiweni zeBaroque, ubuciko obusha namehlo we-gothic awadabuki.
Edolobheni elidala lamasonto amaningi - njenge Isonto iSt . Kuze kube muva nje, ngasendleleni, yisakhiwo eside kunazo zonke edolobheni - ngaphezu kwamamitha ayi-120.
I-Ibid - Cat House, izindlu ezintathu zomlando ezibizwa Abazalwane abathathu, i-Dome Cathedral futhi, yebo, i-Riga Castle. Ngeshwa, ehlobo leli nqaba lonakaliswa kakhulu umlilo, elahlekelana nezinkulungwane zemibukiso nezincwadi ezivela kumtapo wezincwadi.
I-2. Isikhumbuzo seNkululeko: olunye lwezimpawu zedolobha. Kubukeka njengesifanekiso sowesifazane ophethe ekhanda izinkanyezi ezintathu. Izinkanyezi zifanekisela izifundazwe ezintathu zaseLatvia. Yasungulwa ngonyaka we-1935 ukuhlonipha abalwa impi yokulwa nenkululeko yezwe. Esikhathini seSoviet, itshe lesikhumbuzo lalizothwala, kepha lihambe.
Emhlabeni wonke isikhumbuzo seNkululeko siyipaki lapho ungahamba khona futhi ujabulele indebe yekhofi.
I-3. Imakethe Ephakathi: eningizimu yedolobha elidala kunemakethe enkulu lapho ungathenga khona konke - izingubo, ukudla, izincwadi - futhi ngentengo ephansi. Imakethe iyi-UNESCO Heritage Heritage Site. Ingxenye ebalulekile yayo itholakala ku-hangar yakudala eyakhelwe ukusebenza izinkampani zezindiza.
Izivakashi azikwazi ukungazinaki isikhungo esinjalo sokuthenga. Kuphephile, kepha qaphela ukuthi kufanelekile: indawo enjalo - ipharadesi labaphikisi.
Abantu: Abantu abayizigidi ezingu-2.
Indawo: 64.589 m 2 .
Ulimi: IsiLatvia, cishe isigamu sabantu sikhuluma ngesiRashiya.
Currency: IsiLatvia lat.
Ungafika kanjani eRiga: ukuqondisa izindiza zansuku zonke ezivela eMoscow, eSt. Petersburg, eMinsk, eKiev nakwamanye amadolobha; izitimela nazo zigijima nsuku zonke. Ukungena eLatvia abaseRussia badinga i-visa.
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zaseLatvia eziku-Casino
2.1 Ukugembula oku-intanethi eLatvia
2.2 Amasayithi e-casino e-intanethi avuma abadlali baseLatvia
3 Ukugembula eLatvia
3.0.1 Imithetho yaseLatvia ngokugembula - umlando ongemuva
3.0.2 Ukuthi empeleni le mithetho isho umdlali?
3.1 Ungaqala kanjani ukudlala ku-casino e-intanethi?
3.1.1 I-Casino e-Riga
3.1.2 IRiga, eLatvia: “IParis Yasenyakatho”
3.1.3 I-Latvia ebalazweni laseYurophu
3.1.4 Riga ezikhangayo
3.1.5 Amaqiniso ngeLatvia